Kedu ka onye nwere nkụchi obi kwesịrị isi rie nri? - Ne gerekir?
Kedu ka onye nwere nkụchi obi kwesịrị isi rie nri?
EdoziAnya 5.56K 04 / 06 / 2021 ahụ ike
Nnọọ. N'oge na-adịbeghị anya, m nwere nkụchi obi. Nwere ike inyere m aka etu esi eri nri?
Ajuju ajuju enweghi azịza ohuru.
Ne Gerekir Họọrọ ka azịza kachasị mma 04 / 06 / 2021
Kacha ọhụrụ na
Dr. Dilan Çöçelli45 Bipụtara 04/06/2021
Izizi, gbakee n’oge na-adịghị anya.
Ọrịa obi bụ ọrịa nke na-eme na nnukwu ihe mgbu obi n'ihi enweghị ike akụkụ ahụ dị mkpa nke akwara obi n'ihi enweghị ike akụkụ dị mkpa nke akwara obi ka a na-enye nri na ụkọ oxygen mgbe nsogbu na akwara akwara nke obi, ma odi omume puta na onwu.
Akwara akwara: Nwere ike iche banyere ya dị ka ngalaba mbụ nke aorta, arịa kachasị ibu nke na-ekesa ọbara site na obi rue ahụ dum.
Ọ dị mkpa ka oge na-adịghị anya obi na-etinye aka mgbe nsogbu ahụ gasịrị, oke nke mkpọchi n'ime obi, mmebi ya na otu obi si emetụta ihe mgbochi a. Mgbe usoro a gasịrị, ọ ga-aba uru iji gbanwee ndụ ndụ. Kwesịrị ịkpọtụrụ dọkịta gị ma gaa n'ihu dị ka ndụmọdụ ya si dị.
Ikwesighi ngwa ngwa. Ikwesiri inye obi, nkpuru obi na aru gi izu ike. Jide n'aka na gị na dọkịta gị kwurịtara mgbe ị ga-alaghachi na ihe omume gị, otu esi belata ibu arọ na obi, ma ịkwesịrị ịgbanwe ọrụ, yana ajụjụ ọ bụla nwere ike ibilite na mberede.
Ọ bụrụ na awụsa ihe aga - echebara mgbe ọrịa obi busịrị, o nwere ike bụrụ na ọrịa obi ga - amaliteghachi. N'ihi na atherosclerosis, nke na-akpata nkụchi obi, bụ ọrịa na-adịgide adịgide.
Gịnị na-akpata nkụchi obi?
⚠️ Ọmụma mkpụrụ ndụ ihe nketa
Per Ọbara mgbali elu
⚠️ na-a⚠️ụ sịga
Diet Nri na-adịghị mma
Ọ gwụla ma wepu ha na ndụ gị, ihe egwu gị nke inwe nkụchi obi ga-aga n'ihu. E kwesịrị ịgwọ ihe ndị a nke ọma iji zere nlọghachi. Ighaghachi nkụchi obi nwere ike bụrụ ihe dị egwu ma dị egwu maka obi mebiri emebi.
Ikwesiri igbanwe nri gi
Mgbanwe nri nwere ike inye aka belata ihe egwu nke nkụchi obi nke abụọ.
Fruits Ọtụtụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri
2 azu azu kwa izu
Ult Okuko na-enweghị akpụkpọ anụ
✔️ Mkpụrụ na mkpo
✔️ Mkpụrụ osisi zuru ezu
Na-eri nri eji mmanụ oliv eme
Products Ngwa-mmiri ara ehi nwere abụba dị ala
Iri 5-6 kwa izu
Jide n'aka na efere dị iche iche jupụtara na efere gị. Enwere ike iji akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi friji na mkpụrụ osisi bụrụhaala na nnu na shuga adịghị ha.
Ihe a ga-ezere n’ozuzu ya
Ejila oke shuga, nnu na abụba na-adịghị mma. Ikwesiri igbachi abụba zuru oke ma gbochie abụba abụba nye onwe gị.
Overbụ onye ike gwụrụ, ịnọ otu ebe
❌ kindsdị nri niile dị iche iche
Nri e ghere eghe, ọbụna nke a na-esi n'ụlọ
❌ Nnu, shuga
Nri mkpọ nke nwere nnu ma ọ bụ shuga
❌ Nri nri dị ka ibe, cookies, ice cream
Jikere nri friji
Achịcha achịcha na achịcha
Et Ketchup, Mayonezi
Mmanya na-aba n'anya, sịga
Oils Mmanụ oriri na-edozi mmiri (Trans abụba)
A ga-eri azụ ugboro abụọ n’izu. Azụ bụ otu n'ime nri kachasị mma maka obi, mana ịkwesịrị ịhọrọ ụdị dị iche iche.
? azụ asa
Ndị a bụ azụ niile bara ụba na Omega-3. A na-ahụta ya nke kachasị mma dịka o nwere Omega-3 fatty acids nke na - enyere aka belata kọlụm ma melite ahụike vascular.
Debe ihe oriri sodium gị kwa ụbọchị ruo 1.500 mg ma ọ bụ obere ịchịkwa ọbara mgbali.
Ihe onunu onunu
Ihe ọ drinkụ drinkụ kachasị baa uru bụ mmiri mgbe niile. Jụọ dọkịta gị ma ị nwere ike ị drinkụ tii na kọfị. Ka o sina dị, ị ga-a themụ ha n'ebughị ude, mmiri ara ehi ntụ ntụ na shuga.
Na mgbakwunye na nri na-edozi ahụ, mmega ahụ oge niile nwere ike inye aka mee ka ahụike obi dịkwuo mma.
Mgbe i zuru ike nke ọma, ị kwesịrị ịmụ ije, mmega ahụ na ịgbatị oge dịkarịa ala 1 elekere kwa ụbọchị, ọ bụrụhaala na ha adịghị arọ.
Ibufe ibu na-etinye nrụgide na-enweghị isi na obi. Nri na mmega ahụ ga - enyere gị aka ịkwụsị ibu. Agbanyeghị, n'ọnọdụ ụfọdụ nke a ezughi. Cessdị arọ nwere ike ịbụ naanị ọnụ mmiri iceberg. Gwa dọkịta gị banyere usoro ị kwesịrị ịme iji merie ya.
Nchegbu ga-emetụta ahụike obi gị n'ụzọ na-adịghị mma. Nyere aka belata nrụgide site na ntụgharị uche ma ọ bụ usoro njide onwe onye.
Kwụsị ise siga na ịmachi mmanya
Mmanya na-acha ọbara ọbara, yabụ kwesịrị ị itụbiga ya oke ma ọ bụrụ na ị nwere nkụchi obi. Ise siga anaghị emebi obi gị naanị. Know mara na enwere ọtụtụ ihe kpatara ị ga-eji hapụ ya.
Pesdị nri maka obi dị mma
Ọ bụrụ na ị kpebie ịga rie nri, buru ụzọ jụọ dọkịta gị. Ọ bụghị ụdị nri ọ bụla kwesịrị ekwesị maka obi gị.
Họrọ nke na-eme ka ị na-erikwu akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi na ọka niile; gunyere obere mmiri ara ehi, mmiri ozuzu, ulo ozuzu, azu, nkpuru osisi ndi ozo, mmanu akwukwo nri na-adighi ata. amachi oriri na ato uto, sugary ọ drinksụ andụ na-acha ọbara ọbara anụ. Iji nọgide na-enwe ezigbo ahụ ike, jikọta nri na arụ ọrụ ahụ iji gbaa ọtụtụ calorie gị ume.
DASH (Ngwa ngwa ngwa)
Ọ bụ nri a na-eme iji belata ọbara mgbali elu. Dị ka nri Mediterranean, ọ na-elekwasị anya na anụ na-edozi ahụ na nri sitere na osisi.
Isi ihe dị iche na nri ndị ọzọ: DASH na-ezube ibelata sodium na nri gị.
Ihe enwere ike iri
‌✔️ Akwụkwọ nri
Its Mkpụrụ osisi
‌✔️ Mkpụrụ niile
A-abụba abụba ma ọ bụ obere abụba mmiri ara ehi,
A gaghị erepịa ha
AtAbuba nri ara ehi na aki oyibo, ubochi
Oils ‌Alo ahihia ndi di oku, dika nri ndi esiri esi nri
Diet nri Mediterranean
Nri Mediterranean adịghị ejedebe oke oriri sodium, mana ọ nwere ike belata nrịkọ sodium n'ihi nnukwu nri osisi.
Nri a na-elekwasị anya na abụba ahụike, mmanụ oliv, mkpo, azụ na ọka, yana ọtụtụ akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi ọhụrụ. A ga-eri mmiri ara ehi na anụ anụ naanị mgbe ụfọdụ.
Ọ bụrụ n’ikpebie itinye mmiri ara ehi na nri gị, ha kwesịrị ịnwe abụba 1% ma ọ bụ obere.
Ets Ihe oriri sitere na osisi
Nri a na - emepụta nri kacha nta. Ha dabere na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, ọka, mkpo. A naghị atụ aro ndị nwere ọrịa obi (obi na akwara) ka ha soro nri anụ ahụ ma ọ bụ ọbụna nri anaghị eri anụ n'ihi obere vitamin B12 ha. Pescatarian (onye na-anaghị ata anụ ma e wezụga azụ) ma ọ bụ nri sitere n’osisi nwere obere anụ dị mma.
Iri nri ndị ọzọ a na-akụ n’osisi na-enye ihe ize ndụ nke ọrịa obi, ọrịa cancer, ọrịa strok na ụdị ọrịa shuga abụọ.
Iri obere anụ pụtakwara na ị ga na -ebelata abụba na abụba.
Ndị Pesket na-akwụsị iri anụ n’enweghị nsogbu na vitamin B12, zinc, calcium, ma ọ bụ protein. N'ozuzu, nri a yiri nri Mediterranean. Ewezuga naanị otu anụ. Azụ anụ. O nwere ihe mejuputara Omega-3 fatty acids i choro n’ime nri mmiri.
✔️ Mkpụrụ osisi
Fish Azụ mmiri na mmiri nnu
✔️ Akwụkwọ nri
Mkpụrụ osisi na sunflower osisi
Enweghị ike iri ha
Anụ nke anụmanụ na-ekpo ekpo
Nri nri dị ọcha
Nri dị ọcha abụghị nri n'onwe ya, ọ bụ àgwà iri nri. Kpụrụ ahụ bụ iri nri zuru oke nke belatara nri esichara ka obere dyes na ndị na-echekwa nri wee dịrị na tebụl nri abalị. Achịcha na nri oyi kpọnwụrụ nke na-enweghị nnu na shuga bụ ma e wezụga iwu a.
Ihe ọghọm nke nri nri dị ọcha bụ na ị ga-esi ọtụtụ nri n'ụlọ. Restaurantslọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na ụlọ kọfị ị nwere ike ị youụ naanị otu iko.
Iri nri dị ọcha ga-eme ka ị belata nnu, shuga, na abụba zuru ezu. Ọ dị ezigbo mma maka obi ma ọ bụrụ na ị gbakwunye mmachi nke anụ uhie na nri a.
Nwada Nurten, anyi na-eme ka obi di anyi nma. Olileanya na ị na-elekọta onwe gị nke ọma…
Ne Gerekir Okwu dezie 09 / 08 / 2021
Nurten Argin kwuru banyere 07 / 06 / 2021
Ana m ekele gị nke ukwuu, atụghị m anya ụdị azịza ajụjụ a. Ana m ekele gị nke ukwuu maka ịkọwa m gbasara nri.
ifịk 04 / 06 / 2021